I-Bethany Beach Villa amamayela angu-1.5 ukusuka e-Bethany Beach - I-Airbnb
I-Bethany Beach Villa amamayela angu-1.5 ukusuka e-Bethany Beach
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Feather Dusters
U-Feather Dusters Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela ekhaya lakho kude nasekhaya ogwini lwase-Delaware! E-Bethany Beach, e-Rehoboth Beach, e-Dewey Beach, e-Ocean City Maryland. Amabhishi amahle , iphupho le-Golfers, ama-Golf Course angu-3 amahle phakathi nemizuzu engu-. Amamayela angu-1.7 ukusuka e-Bethany beach namanye amabhishi angu-4 phakathi nemizuzu engu-4. Ikhaya lika-2020 Coastal Villa lingamafidi-skwele angu-2700+ endawo enhle yokuhlala yesimanje. Ukupaka kunegalaji lezimoto ezimbili kanye nezimoto ezingu-2 ezengeziwe.
Lungiselela ukuphumula futhi uzijabulise kuleli khaya leholide elimangalisayo elikhulu ngokwanele lokuhlangana komndeni. Hlala kusofa ontofontofo ngenkathi ufunda incwadi. Leli khaya elihle liqukethe ikhishi elikhulu elivulekile, indawo yokudlela, nendawo yokuhlala elungele imibuthano yomndeni noma ubusuku bomdlalo ongathandeki. Wonke amakamelo okulala angu-3+ anekamelo lokulala elivulekile elengeziwe likhipha i-Queen ku-loft ehlanganisa imibhede engu-6. Yiba nematilasi esezingeni eliphezulu ukuze unikeze okungcono kakhulu ekunethezekeni kokuvakasha nokunethezeka. Ngaphandle uzothola itafula elikhulu. Uma uya ebhishi elingamakhilomitha angu-1.7, ungajikeleza, uhambe, noma uthathe isithuthi somphakathi uma sitholakala . Woza uhlale kule ndlu enhle futhi ujabulele iholide lokuphila kwakho konke.
Kukhona ne-clubhouse enakho konke okudingekayo endlini enawo wonke amasevisi acatshangelwayo. I-pool & Clubhouse ivulekile Isikhumbuzo Sosuku Lwabasebenzi futhi izoba ngu-35.00 umuntu ngamunye ngesonto iminyaka engu-6 nangaphezulu. Amakhadi Esikweletu amukelwe. Lokhu kukhokhwa ngokuqondile ku-HOA. Amahora e-Pool 9 AM-9 PM Clubhouse 9am-11PM. Ngakho-ke yiza uphumule kule ndawo kanokusho ngenkathi uxhumana nomndeni. Uqinisekisiwe ukuthi ukujabulele ngokuphelele lokhu Kutholakala emphakathini ocebile we-Ocean View Beach Club, oqhele ngamakhilomitha angu-1.7 kuphela ukusuka e-Bethany Beach, Futhi izifundo zegalofu ezingu-3 ezihamba phambili phakathi nemizuzu engu-... Leli kamelo lokulala elimangalisayo elingu-3, elinendawo yokulala edonsayo, i-villa yokugeza engu-2.5 ihlanganisa i-loft yendawo yokuzijabulisa eyengeziwe, isikrini esikhulu esingu-2 65" i-TV enamashaneli we-cable angu-200+ negalaji lemoto elingu-2 elinezimoto ezifanele ezinye izimoto ezingu-2... lilala izivakashi ezingaba ngu-9! Leli khaya linezinto zokuhlobisa ezihlotshiswe ngobuchwepheshe ezinendawo enkulu yokuba wena nomndeni wakho nabangane bakho nizijabulele. Ikhishi linezinto zonke zikagesi zokupheka zasekhishini, izitsha, izinkomishi, amapuleti njll. Amalineni afakiwe. Asifaki izinto zokugeza. Konke okudingayo ukuletha i-suitcase yakho!
Leli dolobha le-resort line-boardwalk enhle kakhulu, ukudla okumnandi, nezitolo ezingapheli! Jabulela uhambo olufushane lwemizuzu engu-4 oluya ebhishi. Noma Phumula echibini lomphakathi nomndeni wakho nabangane noma udlale ibhola le-bocce noma ibhola lokukhetha enkundleni yezemidlalo. I-clubhouse enhle engu-9000 square foot ihlanganisa isikhungo sokuzivocavoca, igumbi le-billiards, igumbi lekhadi, ne-spa enesidingo esikhulu! Ngemva kokuzivocavoca kwasekuseni, i-zumba, noma ikilasi le-spin, phumula ekamelweni lesitimu noma i-sauna ekamelweni lesikhiye! Lo mphakathi unakho konke ngempela! Futhi I-pool & Clubhouse ivuliwe futhi izoba ngu-35.00 umuntu ngamunye ngeviki izingane ezingaphansi kuka-6 ngaphandle kwenkokhiso. Amakhadi Esikweletu amukelwe. Le mali ikhokhwa ngokuqondile ku-HOA...
Izindawo eziseduze ezithandwayo:
Inkundla Yegalofu ye-Tra Trap Dunes
I-Bayside Resort Golf Course
I-Tanger Outlets ( Miles of shopping)
Ocean City, e-MD
Lewes Beach, DE Imithetho Yendlu:
ukuhlala okuncane kobusuku obungu-6/ubusuku obungu-3 e-
yokuphumula - Azikho izilwane ezifuywayo
-Ukubhema inani lokuhlanza elingu- $ 369 lihlanganisa Isevisi YAMAHHALA yamashidi namathawula . Amalineni awakhokhiswa nathi futhi Inani Lokuhlanza lizoqoqwa ngesikhathi sokubhukha.
Idiphozithi yomonakalo ebuyiselwayo engu- $ 100 izoqoqwa lapho ubhukha.
Izivakashi zizonikezwa iziqondiso zokungena kuhlanganise nekhodi nge-imeyili noma ngomyalezo wekhiphedi evula umnyango wangaphambili emahoreni angu-72 ngaphambi kokungena.
Umphakathi Omusha Omkhulu wamakhilomitha angu-1.5 kuphela ukusuka ebhishi futhi unezindlela zokuhamba ezinhle nemizila yamabhayisikili. Sinamabhayisikili esiwajabulelayo. Vele ulethe i-suitcase yakho futhi ulungele ukuhamba!
Ibungazwe ngu-Feather Dusters
Ungasithinta noma nini nganoma yimiphi imibuzo... Ungashayela ucingo noma uthumele umlayezo... Silapha ukuze sikusize.. Atlan.832.0818
UFeather Dusters Ungumbungazi ovelele